‘सील’पछिको नाका झनै भीड – sunpani.com
‘सील’पछिको नाका झनै भीड
सुनपानी । १० चैत्र २०७६, सोमबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – पारी रुपैडिहाको एसएसबी चेकपोष्ट नजिक लामो लाइन छ । दशगजामा छोटो अर्को लाइन छ । स्वास्थ्य जाँच गर्न टाँगिएको पालमा पनि लामै लाइन छ । यी भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको तीन ठाउँको लाइन थियो । यता भारत जानेको लाइन पनि लामै छ ।
नेपालगञ्ज नाका सात दिनलाई सील (बन्द) गरिएको छ । भारतका विभिन्न ठाउँमा पुगेका नेपालीहरु फर्किने क्रममा नाका अलपत्र पर्दाको लाइन हो यो । विहान चार बजेदेखि लाइनमा बसेका कतिपय थाकेर पलेटी कसेर बसेका छन् ।
के गर्ने, कसो गर्ने ? एघार बजेसम्म अन्यौल नै रह्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्का, नेपालगञ्जका मेयर डा. धवलशमशेर राणा, एसपी वीरबहादुर ओली केही ढिलो गरी नाका पुगेपछि बल्ल निकास निकालियो । त्यसअघि नै प्रदेश सांसद आइपी खरेल, कृष्णा केसी नमुना, नेपालगञ्जका उपमेयर उमा थापामगर, डीएसपी शिवबहादुर सिंहको टोली नाकामा थियो ।
नाकामा झण्डै पाँच सय मानिस थिए । त्यसमध्येमा नेपालतर्फ आउदै गरेकालाई नाकामा तापक्रम नापियो, मास्क र हात धुन लगाइयो । त्यसपछि नगर बसमा चढाएर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगञ्जमा ल्याइएको छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलाई क्वारेन्टाइनको रुपमा परिणत गर्दै भारतबाट आएका नेपालीलाई त्यहाँ राखिएको छ । क्याम्पसमा प्रवेश गर्दा गेटमै हात धुन लगाइएको छ ।
सांसदद्वय खरेल र केसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्का, मेयर डा. राणा, एसपी ओलीले क्याम्पसमा राखेर स्वास्थ्य जाँच गरेपछि सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने बताउनु भएको छ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका मानिसहरु यहाँ छन् । क्वारेन्टाइनमा राखेको स्वास्थ्य जाँच गर्दा ज्वरो आएको, रुघाखोकी लागेका भेटिएमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपालगञ्जमा ४० बेडको आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गरिसकिएको छ ।